USimona no-Angela-Kuya kubakho iiNtsuku zobumnyama-ukubala ukuya eBukumkanini
USimona noAngela-Kuya kubakho iintsuku zobumnyama
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Angela nge-8 ka-Agasti ka-2020:
Ngale ngokuhlwa uMama wabonakala onke enxibe ezimhlophe; Ingubo eyayisongelwe ngaphakathi kuye neyayigqume entloko nayo imhlophe, kodwa ngokungathi yenziwe ngesigqubuthelo esibuthathaka. Esifubeni sakhe uMama wayenentliziyo yenyama ethweswe imithana enameva; iingalo zakhe zazivulekile ngophawu lokwamkela. Entlokweni yakhe wayenesithsaba esimkanikazi kwaye iinyawo zakhe zingenanto, zibekwe emhlabeni. Umama wayenerosari emhlophe ngasekunene kwakhe, okhanyise kakhulu kwaye wehla phantse ezinyaweni zakhe. Umama wayebuhlungu.
Ngamana uYesu Kristu angadunyiswa.
Bantwanana abonwabileyo, ndiyabulela ukuba ngokuhlwanje nilapha ehlathini lwam olusikelelekileyo lokundamkela kunye nokuphendula umnxeba wam. Bantwana bam, umhlaba ufuna umthandazo, iintsapho zidinga umthandazo, iCawe ifuna umthandazo kwaye ndiya kunyanzelisa ukukubuza umthandazo. Bantwana bam, amaxesha amafutshane; Kuya kubakho imihla yobumnyama neyoyikeka, kodwa ayikuko nonke ukuba nikulungele, kwaye ngokuqinisekileyo kungenxa yesi sizathu sokuba uThixo endithumela phakathi kwenu. Bantwana bam, uThixo ufuna ukuba nonke nisindiswe, kodwa nina nibanjiwe zizinto zehlabathi kwaye nijikela kuThixo kuphela ngexesha lesidingo. Bantwana abancinci, kubalulekile ukuba namava kaThixo yonke imihla: sukujika kwimisakramente, ungasuki emthandazweni, ubomi bakho bube ngumthandazo. Zinike zonke izinto kuThixo, ungoyiki ukubuza kuye: uThixo nguBawo kwaye uyabuqonda bonke ubuthathaka bakho kunye nayo yonke intswelo yakho.
Bantwana bam, le ndawo iya kuba yindawo yokuthandaza; yinyamekele le ndawo kwaye ukhawuleze apha ukuthandaza, ungahambi apha. Kule ndawo kuya kubakho iindawo zokuzonwabisa ezininzi.
Ngeli xesha, imitha yokukhanya epinki, emhlophe neblue yaphuma ezandleni zikaMama kwaye yalayita yonke imithi.
Bantwana, zezi ziindawo zokubonisa endizinika zona lonke ixesha. Thandazani, bantwana bam.
Emva koko ndithandaze noMama kwaye ekugqibeleni wabasikelela bonke.
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona nge-8 ka-Agasti ka-2020:
Ndabona uMama: enengubo emhlophe, ibhanti legolide ejikeleze esinqeni sakhe, entloko kuye isisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini kunye nesigqubuthelo esimhlophe esimhlophe esisebenza njengengubo saya ezantsi ezinyaweni zakhe zingenanto zibekwe emhlabeni . Umama waye izandla zakhe zigogekile emthandazweni kwaye phakathi kwazo bekune rose enkulu emhlophe.
Bantwana bam abathandekayo, ndiyanibulela ngokungxamisekileyo kolu mnxeba wam; Ndiyanithanda, bantwana bam, ndiyanithanda. Bantwana, thandazani; Bantwanana, anizele ububi, anibambe, uya kuqhubeka ndinilinga ukuze anibange niwe. iyadimaza, ikwenza ukholelwe ukuba akukho ngomso, ukuba akukho thando; kodwa bantwana bam, kuxhomekeke kuni, kuxhomekeke kuni ukuba ngubani na enimlandelayo, lowo nimthandayo, lowo nikholwayo kuye. Bantwanana, ukuba bahende okonakeleyo, kodwa kuxhomekeke kuni ukuba nizinikezele ekuhendweni; nikhululekile. UThixo eluthandweni lwakhe olukhulu ukukhuphele simahla kwaye uyakuthanda nokuba ukhetha ntoni na; Uyakuthanda nokuba kunjalo kwaye uhlala. Bantwana bam, yomelelani ngomthandazo, nangeesakram ezingcwele; Bona ukuba umhlaba ugcwele ububi.
Njengoko umama wayethetha le nto, ndabona izithunzi ezininzi ezimnyama zisasazeka emhlabeni phantsi kweenyawo zakhe, kwaye naphi na apho amathunzi afikelela khona apho yintshabalalo nentshabalalo.
Bantwana bam, umthandazo owenziwe ngentliziyo, nothando kunye nokholo oluyinyani unokwenza yonke into.
Ngelixa umama wayethetha le nto, uninzi lwee-petals zaqala ukuwa kwi-rose ezandleni zalo, ezazichukumisa umhlaba, zajika zaba ngamaconsi amanzi achumisa umhlaba zaze zaphinda zenza imbali kwakhona.
Qaphelani, bantwana bam, amandla omthandazo; bangakhathali ukuthandaza, bantwana bam, musani ukumka entliziyweni yam yokungamanyani. Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama kum.
← Iipodcasts zakho
UJennifer - Abantwana bam bayalwa… →